I-Murray River Retreat - I-Absolute River Front - I-Airbnb
I-Murray River Retreat - I-Absolute River Front
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kerrie
U-Kerrie Ungumbungazi ovelele
Ikhaya leholide lesitayela esikhulu se-Hamptons ukuze umndeni wakho noma abangani bajabulele. I-Absolute River ngaphambili kuMfula iMurray (hhayi imisele) enejethi lakho langasese kanye nolwandle oluyimfihlo. Imizuzu emi-5 ukhuphuka nomfula futhi use-Estuary.
Leli khaya beliyikhaya lethu leholide lomndeni iminyaka engama-20. Salungisa ngokuphelele ngo-2015, sabe sesinquma ukuthi sivumele iholide lesikhashana. Sibe nezivakashi eziningi ezimangalisayo ezithanda nje indawo nokuthi ikhaya lilungiselwe izivakashi kahle kangakanani, ukuze nivele nizifice, niphumule futhi nijabulele le ndawo enhle kakhulu esemfuleni iMurray ngelakho ijethi langasese. Yonke imibhede ye-Queen emisha ithengwe omatilasi abaphazamisa ozakwethu abancane bango-December 2020.
I-carport yamahhala emagcekeni – izikhala ezingu-10
Uzoba nesikhathi esinjalo somlingo nabangane bakho nomndeni wakho! Nali ulwazi lwendawo mayelana nezindawo zokudlela ezifinyeleleka ngesikebhe, imoto nokuhamba ngezinyawo.
OKOKUQALA I-BBQ YETHU - sinendawo enomlingo emfuleni i-Murray, ungase ungafuni ukuhamba :)
IZIDOLO NGESIKHETHI! I-Sandy Cove Tavern, Ihhotela i-Jetty's Bar kanye ne-Grill Ravenswood Hotel, i-Pelicans Cafe (enhle ngezinhlanzi nama-chips). Bonke banamajethi okubopha kuwo. Siseduze ne-Estuary ngakho ukungena e-Mandurah ukuze uthole izindawo zokudlela kulula ngempela uma unemephu yezindlela zamanzi.
I-PELICAN'S CAFE - hamba phambi komfula i-Murray ukuya kwesokudla, weqa kanye nebhuloho elincane futhi ufika e-Pelican's, noma ngesikebhe. I-paddle elula esikebheni noma kayaks.
I-PINJARRA inezindawo zokudlela ezincane ezinhle.
I-JARRAH INFUSION - UGeorge Street isitolo esincane esinendawo engaphandle enhle ukuze udle ngemuva. Ngokuvamile abathathu abadlala ngeSonto.
AMAGUMBI ETHIYE E-PINJARRA EDENVALE 2 - 2 Henry Street Pinjarra, yindlu yomlando enamagiya aqoqwayo ngemuva kumashedi amakhulu.
I-PINJARRA PREMIER HOTEL - sisanda kuthola le ndawo, iyishibhile evamile kodwa ukudla kuhle kakhulu. Abangane bami basanda kuthi “isemishi le-steak elingcono kakhulu” abake baba nalo. Ngempelasonto banabathathu noma ibhendi edlala engadini kabhiya.
STONES THROW CAFE ngaphakathi kwe-IGA yangakithi, konke ukudla okwenziwa ekhaya, banamathileyi e-lasagne, amabhaka njll esiqandisini eduze nesigaba sezithelo nemifino. Kulula kakhulu uma ungafuni ukupheka.
I-DWELLINGUP - imizuzu engama-35 ukushayela ukusuka ku-12 Alambia. Idolobhana elihle kangaka lapho i-Hotham Valley Train isuka khona. Isitimela esinomusi sisebusika kuphela, kodwa isitimela sikadizili sihamba ekuseni nantambama nsuku zonke. Iphuma imizuzu engu-40 idlula eForrest, ima imizuzu engu-20 uhamba ngezinyawo bese ibuya futhi. Amakhefi amancane e-Dwellingup wonke amahle kakhulu.
Hi there! We are very proud of our holiday Home and go to great lengths to make sure everything is perfect for guests when they arrive.
Sitholakala 24/7 uma unemibuzo ngaphambi noma ngesikhathi sokuhlala kwakho.
UKerrie Ungumbungazi ovelele